Real Madrid oo bartilmaameedkeeda sare ka dhiganeysa mid ka mid ah xiddigaha Chelsea – Gool FM
Real Madrid oo bartilmaameedkeeda sare ka dhiganeysa mid ka mid ah xiddigaha Chelsea
Byare October 21, 2016
during the Barclays Premier League match between Chelsea and Sunderland at Stamford Bridge on May 24, 2015 in London, England.
(Madrid) 21 Oktoobar 2016. Sida ay warineyso Don Balon Real Madrid ayaa bartilmaameedkeeda sare ka dhiganeysa goolhayaha reer Belgium Thibaut Courtois ee shabaqa u ilaaliya naadiga Chelsea iyadoo uu laacibku qudhiisana uu doonayo inuu u soo dhaqaaqo Santiago Bernabeu.
Los Blancos ayaa si wayn dhawaanahan lala xiriirinayay inay u soo dhaqaaqdo shabaq ilaaliyaha Manchester United ee David de Gea, lakiin waxaa iminka la aaminsan yahay inay dareenkeeda u weecisay dhanka Stamford Bridge.
Courtois ayaa horey saddex sano oo amaah ah ku soo qaatay Madrid gaar ahaan Atletico Madrid, 24-jirka ayaana la sheegay inuu u furan yahay fikrada uu dib ugu laabanayo caasimada Spain haddii uu dalab soo gaaro xagaaga soo socda.
Banaadir oo dirqi ku badisay iyo Jeenyo oo dhib la’aan uga adkaatay Gantaalaha Afgooye + SAWIRRO
Luis Suarez oo ku dhow inuu heshiis dheer u saxiixo Barcelona